COVID-19: Soomaali | Hennepin County
Hennepin County > Emergencies > COVID-19: Soomaali
Hel caawimo dhar, kaalmo lacageed, addeeg cunto, daryeel caafimaad, qalab, iyo daawo adigoo wacaya Khadka caawimada Degmada Hennepin ee dadka uu saameeyey cudurka COVID-19:
8 aroortii ilaa 4:30 galabnimo
Iniinta ilaa Jimcaha
Soo sheeg takoorka adigoo wacaya Khadka waaxda caawimaada xuquuqda aadamaha ee Minnesota.
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota bogeeda kusaabsan COVID-19 (Soomaali)
Kabaro kala fogaynta bulshada (YouTube)
Sida iyo sababta loo xirto maaskaraatada wajiga oo maro ah (YouTube)
Sida aad u mayran lahayd gacmaha (YouTube)
TPT Karoonofayras: Almanac Khaas (Soomaali)
Waxyaabaha la daabacayo
Xaashida ilaha dambiyada Nacaybka oo ku qoran (PDF)
Xaashida ilaha Socdaalka oo ku qoran (PDF)
Sharaxaad Kooban oo kusaabsan COVID-19 (PDF)
Meelaha laga helo daryeel caafimaad oo qiimo jaban ama caymis caafimaad (PDF)
Boga warbaahinta bulshada ee Dagmada Hennepin sidoo kale waxay bixiyaan macluumaad tarjuman nagala soo xiriir halkan:
Ilaha bulshadu caawimada ka helayso oo Soomaali ah
Waxaa hoos ah ilaha caawimada bulshada oo kala duwan. Liiska ilaha caawimada bulshada oo dhamaystirana, booqo boga ilaha caawimada ee Degmada Hennepin.
Caymiska Shaqo La’aanta ee Minnesota
Waxaad ka helaysaa macluumaad ku saabsan yaa la siin karaa manfacyada shaqo la’aanta iyo sida loo codsado. Booqo boga Caymiska Shaqo la’aant Minnesota oo af Soomaali ah
Shelefyo laga bixiyo cunto dhaqamo gaar u ah ayna ku jirto cunto xalaal ah ayaa ku yaal meelo kala duwan deegaanka Metro. Bernaamijka caafimaadka Dhimirka/maskaxda Iyo macluumaadka COVID-19. Booqo boga Isuroon oo af Soomaali ah
Shelefka cuntadu wuxuu bixinayaa cunto hore loo soo xirxiray oo aad ka qaadanaysid wadad geeskeeda ama qarkeeda. Balana uma baahnid. Booqo boga Interfaith Outreach and Community Partners oo af Soomaali ah
Iskuulada Dadweynaha Minneapolis
Caruurta da’doodu ka hoosayso 18 jir waxay todobaadkiiba ka heli karaan sanduuq cunto oo bilaash ah meelo kala duwan oo Minneapolis ah. Booqo boga Iskuulada Dadweynaha Minneapolis oo af Soomaali ah
Waaxda Xuquuqda Aadanaha ee Minnesota
Khadkan caawinta wuxuu xoojinayaa dadaalka gobolka ee ah inuu ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee dadka Minnesota. Wuxuuna u ogolaanayaa sidii kuwa ay la soo gudboonaatay ama arkay eexashada iyo takoorka u soo sheegaan dhacdooyinka. Waaxda Xuquuqda Aadanaha ee Minnesota : Wac 1-833-454-0148.
Guryaynta iyo korantada, biyaha, gaaska, talefoonka, qashinka
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud:
Joojinta guri ka saarista: dadka, shirkadaha guyaha kireeya iyo hay’adaha maaliyada ma bilaabi karaan howsha guri ka saarista tasoo keeni karta in kiraystayaasha guryaha waayaan dagenaanshohooda inta lagu jiro dhibaatada cudurka COVID-19. Hadii adiga ama qof kale looga saaro guriga si khaldan waxaad la xiriiri kartaa Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud. Booqo boga Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud oo dooro af Soomaali
HomeLine waxay bixiyaan adeegyo bilaasha ah ama qiimo jaban oo xag sharci, abaabul, waxbarid, iyo u doodis ah si ay kiraystayaasha Minnesota u xalistaan dhibaatooyinka ka soo gaara kiraystayaasha guryaha. Booqo boga HomeLine oo af Soomaali ah
Taleefishinka Dadwaynaha ee Magaalooyinka Mataanaha-Twin Cities ( TPT)
Bogani wuxuu bixiyaa ilaha aad ka heli kartid qalabka la xiriira waxbarashada. Booqo Taleefishinka Dadwaynaha ee Magaalooyinka Mataanaha (TPT) oo af Soomaali ah
Waxay caawisaa dhalinyarada sidii ay u noqon lahaayeen kuwa ka war qaba waxa uu yahay welwelka, waxa keena iyo sidii ay u xalin lahaayeen . Waxaa kaloo jira Ilaha ay caawimaada ka helayaan waalidiinta, aqoon yahanada iyo dadka waaweynba. Booqo boga internetka Change to Chill oo af Soomaali ah
Liiska Ilaha ay ka heli karaan qoysaska iyo da’yarta waxyaabaha ay mid yihiin hagida macluumaadka caafimaadka dhimirka/maskaxda, nafaqada iyo la tacaalida xaalada. Booqo boga YWCA Minneapolis oo af Soomaali ah
Waaxdu waxay daabacday tilmaame cusub si ay u caawiso ganacsatada, milkiilayaasha dhismayaasha, milkiilayaasha guryaha iyo kiraystayaasha si ay si fiican ugu fahmaan talaabooyinka ay qaadayaan sidii ay khasaaraha soo gaaray ugu gudbisan lahaayeen caymiskooda.
Visit the Minnesota Department of Commerce
Ka hel halkan Hagaha caymiska guryaha la degan yahay oo ah af Somali (PDF)
Ka hel halkan Hagaha Caymiska Ganacsiga oo ah af Somali (PDF)